" ကထိနျ "
" စုပေါငျး ဘုံ ကထိနျ "
" ကထိနျ သင်ျကနျး "
" ကထိနျ သင်ျကနျးကပျတယျ "
" ကထိနျခငျးတယျ " စတဲ့ ... စကားခပျြတှကေတော့ ကထိနျ နဲ့ပတျသကျရငျအမွဲကွားလရှေိ့ကွပါတယျ။
သာမနျဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ အမြားစုကတော့ ..
"ကထိနျ " ဆိုလို့သာ.. မိမိတို့ရဲ သဒ်ဓါ တရားတှေ ရှိနတေဲ့အတှကျကွောငျ့သာ လှူလိုကျ၊ တမျးလိုကျ ကွတာပါပဲ။ " ကထိနျ " နဲ့ပတျသကျတဲ့ လှူဒါနျးရတဲ့ အကွောငျးကို မသိကွသူကမြားကွ ပါတယျ။
"ကထိနျ" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ.. "ကထိန" ဟူသော ပါဠိ ကိုမွနျမာမှု ပွုထားခွငျး ဖွဈပါသညျ။
"ကထိနျ" ဟူသညျကား ခိုငျမွဲခွငျး၊ ကွံ့ခိုငျခွငျွး ဖဈပါသညျ။ အခွားတဈဘကျတှငျလညျး လှနျမွောကျခွငျး ကငျးလှတျခွငျးဟု ညှနျးဆို ကွပါသညျ။
ကထိနျခငျးတယျ ဆိုတာ... " ရဟနျးတျောတှရေဲ့ အလုပျပါ " ကထိနျခငျးတယျလို့ပွောလိုကျရငျ. ကထိနျခငျးတဲ့ အလုပျကို လူဝတျကွောငျဒကာ၊ ဒကာမတှကေ လုပျကွတယျလို့ လူအမြားစုက ထငျနကွေပါတယျ။ တကယျတော့ ... ကထိနျးခငျးတဲ့ အလုပျဟာ .. လူဝတျကွောငျ ဒကာ ဒကာမတှရေဲ့ အလုပျမဟုတျပါဘူး။ ရဟနျးတျောတှရေဲ့ အလုပျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရဟနျးတျောတှကေပဲ "ကထိနျခငျး " ကွတာပါ။
ဒါပမေဲ့.. ရဟနျးတျောတှေ " ကထိနျခငျးမဲ့သင်ျကနျးကို အမြားအားဖွငျ့တော့ လူဝတျကွောငျ ဒကာ၊ ဒကာမတှကေပဲ လှူဒါနျးကွပါတယျ။
အဲဒီလို ကထိနျခငျးမဲ့သင်ျကနျး လှူဒါနျးတာကိုပဲ "ကထိနျခငျးတယျ" လို့ တငျစားပွီး ပွောကွရငျးက .. ကထိနျ သင်ျကနျး လှူတဲ့သူတှကေို " ကထိနျခငျးတဲ့ သူတှေ" လို့ ချေါဝျေါ နကွေတာပဲဖွဈပါတယျ။ အမှနျစငျစဈတော့ ... လူဝတျကွောငျ ဒကာ၊ ဒကာမတှဟော ကထိနျခငျးတဲ့ သူတှေ မဟုတျကွပါဘူး။ "ကထိနျ သင်ျကနျး " လှူတဲ့သူတှပေဲ ဖွဈကွပါတယျ။
ပွီးတော့... ဒီ " ကထိနျ သင်ျကနျး" ကို လူဝတျကွောငျ ဒကာ၊ ဒကာမေ တှ ကပဲ လှူခှငျ့ရှိတာ မဟုတျပါဘူး။
* ရဟနျး သာမဏတှေလေညျး လှူခှငျ့ ရှိပါတယျ။
* သီလရှငျတှလေညျး လှူခှငျ့ ရှိပါတယျ။
* လူသားတှပေဲ လှူခှငျ့ရှိတာ မဟုတျပါဘူး။
* နတျတှလေညျး လှူခှငျ့ ရှိပါတယျ။
* ဗွဟ်မာတှလေညျး လှူခှငျ့ ရှိပါတယျ။
* နဂါး ဂဠုနျတှလေညျး လှူခှငျ့ ရှိပါတယျ။
ကမျြးဂနျထဲမှာ ... ကထိနျ သင်ျကနျး လှူခှငျ့ရှိသူကို .. "လူရယျ၊ နတျရယျ၊ သီတငျး သုံးဖျေါ( ၅ )ဦးရယျ" လို့ ဆိုပွီး ..ပုဂ်ဂိုလျ( ၇ )မြိုး ကို တိုကျရိုကျ ပွထားပါတယျ။
သီတငျးသုံးဖျေါ( ၅ )ဦးဆိုတာ ... "ရဟနျး၊ ရဟနျးမ၊ သာမဏေ၊ သာမဏေ နဲ့ သိက်ခမာနျ" တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
"သိက်ခမာနျ " ဆိုတာ ... ဘိက်ခုနီမ(ရဟနျးမ) မဝတျမီ သိက်ခာပုဒျ ( ၆ )ပါးကို ( ၂ )နှဈတိတိ ကငျြ့နတေဲ့ "သာမဏေ တဈမြိုး "ကို ချေါတာပါ။
ပဓာန နညျးအားဖွငျ့ တိုကျရိုကျပွထားတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ( ၇ )မြိုးထဲမှာ .. နဂါး၊ ဂဠုနျစတဲ့ တိုကျရိုကျပွမထားတဲ့ တခွားပုဂ်ဂိုလျတှလေညျး အကြုံးဝငျပါတယျ။ အသိဉာဏျရှိသူ မညျသူမဆို ကထိနျသင်ျကနျး လှူခှငျ့ရှိတယျဆိုတဲ့ သဘောပဲဖွဈပါတယျ။
ရဟနျးတျော၊ သံဃာတျောတှကေို ကထိနျသင်ျကနျး လှူခှငျ့ရှိသူမြား စာရငျးမှာ တိုကျရိုကျ ပွထားတဲ့ အတှကျ .. ရဟနျးတျော၊ သံဃာတျောတှေ ကိုယျတိုငျ လှူတဲ့သင်ျကနျးနဲ့ ကထိနျ ခငျးကောငျးပါတယျ။ ကထိနျခငျးခဲ့ရငျလညျး ကထိနျ အထ မွောကျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့..... ရဟနျးတျော ကိုယျတိုငျ " အလှူခံတဲ့ သင်ျကနျး" နဲ့တော့ ကထိနျမခငျး ကောငျးပါဘူး။ အကယျ၍ ကထိနျခငျးခဲ့ရငျ လညျး ကထိနျအထ မမွောကျပါဘူး။
" ကထိနျ" တဈခု အထမွောကျဖို့ အတှကျ ... ကထိနျသင်ျကနျး လှူတဲ့သူ ဘယျသူလဲဆိုတဲ့ အခကျြက အဓိက မကပြါဘူး။ လှူတဲ့ ကထိနျ သင်ျကနျး ဟာ.. " ဘယျလို သင်ျကနျးလဲ" ဆိုတဲ့အခကျြက အဓိက ကပြါတယျ။
ကထိနျတဈခု အထမွောကျဖို့အတှကျ ... လှူတဲ့ "ကထိနျ သင်ျကနျး" ဟာ….
( ၁ ) မိုးကသြင်ျကနျး လညျး ဖွဈရပါမယျ။
( ၂ ) မသိုး သင်ျကနျး လညျး ဖွဈရပါမယျ။
( ၃ ) သံဃိက သင်ျကနျး လညျး ဖွဈရပါမယျ။
သင်ျကနျး သုံးထညျ ဖွဈရမယျလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတျပါဘူး။ သင်ျကနျး တဈထညျတညျးကပဲ
( ၁ ) " မိုးကြ " ဖွဈခွငျး၊
( ၂ ) "မသိုး " ဖွဈခွငျး၊
( ၃ ) " သံဃိက " ဖွဈခွငျးဆိုတဲ့ ... အရညျအသှေး( ၃ )မြိုးနဲ့ ပွညျ့စုံ ရမယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။
( ၁ )မိုးကြ သင်ျကနျး
မိုးရေ မိုးပေါကျတှဟော ဘယျသူ့ရဲ့ တိုကျတှနျးလှုံ့ဆျောမှုမှ မပါဘဲ ၊ မိုးကောငျးကငျအပျေါကနေ အလိုအလြောကျ ကလြာသလို... ကထိနျသင်ျကနျးဟာလညျး ..ကထိနျခငျးမဲ့ ကြောငျးတိုကျက ရဟနျးတျောတှထေဲက ဘယျ ရဟနျးတျောရဲ့ တိုကျတှနျး လှုံ့ဆျောမှုမှ မပါဘဲ အလှူရှငျက သူ့သဒ်ဓါ တရားနဲ့သူ အလိုအလြောကျ လာလှူတဲ့ သင်ျကနျး ဖွဈရပါမယျ။
ကိုယျ လုံးဝ မတိုကျတှနျးဘဲ ...သူ့အလိုအလြောကျ ရတဲ့ သင်ျကနျး၊ ကိုယျလုံးဝ အလှူမခံဘဲ ... သူ့အလိုအလြောကျ လာလှူတဲ့ သင်ျကနျးကို မိုးပျေါက ရုတျတရကျ ကလြာတဲ့ အရာဝတ်ထုနဲ့ တူလို့ .. မိုးကြ သင်ျကနျး (မိုးပျေါကြ သင်ျကနျး) လို့ ချေါပါတယျ။
ရဟနျးတျော၊ သံဃာတျောတှဟော " မိခငျရငျး၊ ဖခငျရငျး"ဆီကတောငျမှ ကထိနျ သင်ျကနျး " အလှူမခံ" ကောငျးပါဘူး။ အဲဒီလို မိခငျရငျး၊ ဖခငျရငျးဆီက အလှူခံလို့ ရလာတဲ့ သင်ျကနျးနဲ့ ကထိနျခငျးရငျလညျး ကထိနျ အထ မမွောကျပါဘူး။
ပွီးတော့.. ဥပမာ ..ရဟနျးတျောက မိဘကြေးဇူး အထူး ဆပျခငျြလို့ဆိုပွီး ..ထူးခွားတဲ့ ကထိနျ အလှူ ကုသိုလျကွီး မိဘနှဈပါးရစခေငျြတဲ့ စိတျနဲ့ မိဘကို ကထိနျ အကွောငျးတှေ ပွောပွပွီး တိုကျရိုကျနညျးနဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ သှယျဝိုကျတဲ့နညျးနဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ ကထိနျသင်ျကနျး အလှူခိုငျးတယျဆိုရငျ အဲဒီသင်ျကနျးနဲ့ ကထိနျခငျးပမေဲ့ ကထိနျ အထ မမွောကျတော့တဲ့အတှကျ မိဘ ကြေးဇူးလညျး အထူးဆပျရာ မရောကျတော့ပါဘူး။ မိဘနှဈပါးလညျး ထူးခွားတဲ့ ကထိနျ အလှူကုသိုလျကွီးမရတော့ပါဘူး။
မိမိ ဝါဆို တဲ့ ကြောငျးတိုကျရဲ့ ကထိနျအတှကျ အလှူမခံကောငျးဘူးလို့ ပွောတာပါ။ ရဟနျးသံဃာဟာ မိမိခငျးမဲ့ကထိနျအတှကျ ဘာလုပျပေးပါ၊ ညာလုပျပေးပါ ဆိုရငျတော့.. ကထိနျအထမမွောကျဘူး ပေါ့၊ ဒါပမေဲ့ တဈခွား ကြောငျးတိုကျရဲ့ကထိနျ အတှကျဆိုရငျတော့ လှူဖို့ တိုကျတှနျး ကောငျးပါတယျ။ တိုကျတှနျးလို့ ရပါတယျ။ လိုအပျရငျ တိုကျတှနျးဖို့လိုအပျပါတယျ။
ကထိနျသင်ျကနျး လှူခှငျ့ ရှိသူတှထေဲမှာ ရဟနျးတျောတှလေညျး ပါတဲ့အတှကျ ..ရဟနျး တဈပါးပါးက ဦးစီးဦးဆောငျပွုပွီး ၊ တပညျ့ဒကာ ဒကာမတှနေဲ့ တခွားကြောငျးတိုကျ တဈခုခုမှာ ကထိနျသှားခငျး တယျ ဆိုရငျလညျး ရပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ...ကထိနျခငျးမဲ့ ကြောငျးတိုကျက ရဟနျးတျောတှကေိုယျတိုငျကတော့ ..ကိုယျ့ကြောငျး ကထိနျအတှကျ ဘယျသူ့ကိုမှ ကထိနျ သင်ျကနျးလှူဖို့ မတိုကျတှနျး ကောငျးပါဘူး။
" ဒီနှဈ ကထိနျ ဘယျရကျလဲ"၊
" ဒီနှဈလညျး ဘုံကထိနျပဲလား"
" ဒီနှဈ ကထိနျသင်ျကနျး " လှူဖို့ ပွောထားတဲ့သူမရှိသေးဘူး၊
" ကထိနျရာသီတော့ ရောကျလာပွနျပွီနျော" . . . စသညျ စသညျအားဖွငျ့..ဘယျလို အရိပျနိမိတျမြိုး ပွပွီးတော့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ဘယျလိုပရိယာယျ စကားမြိုး ပွောပွီးတော့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ကထိနျခံ ရဟနျးတျောတှေ ကိုယျတိုငျ ကထိနျ သင်ျကနျး အလှူမခံ ကောငျးပါဘူး။
ကထိနျခငျးမဲ့ ဒကာ ဒကာမတှကေ ကထိနျနဲ့ ပတျသကျလို့ ဘာစကားမှ မစ,ရသေးဘဲနဲ့ ကြောငျးတိုကျ ရဟနျးတျောထဲက တဈပါးပါးက ကထိနျအကွောငျး မစမိအောငျ အထူး သတိပွုရပါမယျ။ ဒကာ ဒကာမတှကေ ၊ ဘာမှ မလြှောကျရသေးဘဲနဲ့ .. " ဒီနှဈ ကထိနျ ဘယျရကျလဲ" လို့ ကိုယျ့ဘကျက စမမေးသငျ့သလို... "ဒီနှဈတော့ ဒီရကျမှာ ကထိနျခငျးရငျ အဆငျပွမေယျ" ထငျတယျလို့ ..ကိုယျက စပွီး ကထိနျရကျ သတျမှတျပေးမြိုးလညျး လုံးဝ မပွုလုပျသငျ့ပါဘူး။
ကထိနျသင်ျကနျးဟာ.. " အတိ ဥက်ကဋ်ဌ = အလှနျ မွငျ့မွတျတဲ့ သင်ျကနျး" ဖွဈရမယျတဲ့...။
" အလှနျ မွငျ့မွတျတဲ့ သင်ျကနျး" ဆိုတာ တောငျးရမျးမှု၊ တိုကျတှနျးမှု မပါဘဲ အလိုအလြောကျရတဲ့ သင်ျကနျးကို ပွောတာပါ။ တောငျးရမျးခွငျး၊ တိုကျတှနျးခွငျးဆိုတဲ့ အပွဈလုံးဝ ကငျးပွီး၊ အလှနျ့အလှနျ သနျ့ရှငျးစငျကွယျတဲ့ သင်ျကနျးကို ..."မိုးကြ သင်ျကနျး”လို့ ချေါတာပဲဖွဈပါတယျ။
ကိုယျ့ကြောငျးကို ဘယျနေ့၊ ဘယျရကျမှာ ဘယျသူ ကထိနျလာခငျးမယျဆိုတာ လုံးဝ ကွိုမသိဘဲ ကွိုတငျ အသိပေးမထားဘဲ ၊ လာလှူတဲ့ သင်ျကနျး၊ မမြှျောလငျ့ဘဲ ရုတျတရကျရောကျလာတဲ့ သင်ျကနျးဟာ .."မိုးကြ သင်ျကနျး" အစဈဆုံးပါပဲ။
"မတောငျးဘဲရမှ အတိ ဥက်ကဋ်ဌ ( အလှနျ မွငျ့မွတျတယျ ) " ဆိုတာကိုကွညျ့ပွီး ... ဘယျပစ်စညျး လာဘျလာဘ မဆို ၊ ဘယျရာထူး ဋ်ဌာနန်တရ မဆို ကိုယျက မတောငျးရဘဲ အလိုအလြောကျ ရမှ ပိုတနျဖိုး ရှိတယျ။ ပိုသနျ့ရှငျးစငျကွယျတယျလို့ ကောကျခကျြ ခနြိုငျပါတယျ။
( ၂ ) " မသိုး သင်ျကနျး"
သနျ့ရှငျး လတျဆပျတဲ့ ထမငျးကောငျး၊ ဟငျးကောငျး ( မသိုးထမငျး၊ မသိုးဟငျး ) ဆိုတာ ခကျြပွီး တဈရကျမှ မကူးသေးတဲ့၊ ဒီနမှေ့ ခကျြထားတဲ့ ထမငျးဟငျး ဖွဈရသလို ကထိနျ သင်ျကနျးဟာလညျး လှူပွီး တဈရကျမှ မကူးသေးတဲ့၊ ဒီနေ့ လှူထားတဲ့ သင်ျကနျး ဖွဈရပါမယျ။
ခကျြပွီး တဈရကျ ကြျောသှားတဲ့ ထမငျးဟငျး၊ နကေူ့းသှားတဲ့ ထမငျးဟငျးကို တကယျ သိုးသိုး မသိုးသိုးထမငျးသိုး၊ ဟငျးသိုးလို့ပဲ ချေါပါတယျ။
အအေးခနျးထဲ၊ ရခေဲ သတ်ေတာထဲ ထညျ့ထားလို့ ခကျြခငျြးသိုးမသှားသေးလညျး နာမညျကတော့ “ထမငျးသိုး၊ ဟငျးသိုး" ပါပဲ။
လှူပွီး တဈရကျကြျောသှားတဲ့ သင်ျကနျး၊ နကေူ့းသှားတဲ့သင်ျကနျးကို " သင်ျကနျးသိုး" လို့ ချေါပါတယျ။ အဲဒီလို သင်ျကနျးသိုးနဲ့ လုံးဝ ကထိနျခငျးလို့ မရပါဘူး။ ကထိနျခငျးလညျး ကထိနျ အထ မမွောကျပါဘူး။ ( တဈရကျမက ကြျောသှားရငျတော့ အထူး ပွောစရာ တောငျ မလိုတော့ပါဘူး )
လှူပွီး တဈရကျမှ မကြျောသေးတဲ့ သင်ျကနျး၊ နမေ့ကူးသေးတဲ့ သင်ျကနျး၊ ဒီနမှေ့ လာလှူတဲ့သင်ျကနျးကို .."မသိုး သင်ျကနျး" လို့ ချေါတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ " မသိုး သင်ျကနျး" နဲ့ခငျးမှ ကထိနျ အထ မွောကျပါတယျ။
ရဟနျးတျောတှဟော ကထိနျ သင်ျကနျး ဒီနရေ့ရငျ ဒီနပေဲ့ ကထိနျခငျးရပါတယျ။ အလုပျ မအားလို့၊ အဆငျမပွသေေးလို့ ဆိုပွီး နောကျနမှေ့ ကထိနျခငျးလို့ မရပါဘူး။ ကထိနျသင်ျကနျး အလှူခံပွီးတဲ့ နရေဲ့ နောကျတဈနေ့ အရုဏျမတကျခငျမှာပဲ ၊ ကထိနျခငျးခွငျး ကိစ်စ ပွီးစီးအောငျ ဆောငျရှကျရပါတယျ။
ကထိနျသင်ျကနျး အလှူခံပွီးတာနဲ့ ခကျြခငျြး ကထိနျခငျးရမယျလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတျပါဘူး။ နောကျတဈနေ့ အရုဏျမတကျမခငျြး ဘယျအခြိနျမှာ မဆို ကထိနျခငျးလို့ ရပါတယျ။
"ကထိနျ သင်ျကနျးဟာ နမေ့ကူးတဲ့ မသိုး သင်ျကနျးဖွဈရမယျ"ဆိုတာကို ကွညျ့ပွီး ..တခြို့က ကထိနျရကျ မတိုငျခငျ ကထိနျ သင်ျကနျးကို ကြောငျးမှာ သှား မထားကောငျးဘူးလို့ ယူဆ နကွေပါတယျ။
လမျးခရီး ကွုံနရေငျတောငျမှ ကထိနျ သင်ျကနျး ကိုငျလကျြတနျးလနျးကွီးနဲ့ ကြောငျးတိုကျထဲကနေ ဖွတျမသှားကောငျးဘူးလို့တောငျ ထငျနကွေပါတယျ။ အဲဒီလို မဟုတျပါဘူး။ ကထိနျ သင်ျကနျးကိုရော၊ ကထိနျရံ သင်ျကနျးတှကေိုရော ၊ ကထိနျရကျ မတိုငျခငျ ကြောငျးမှာ သှားထားလို့ ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ .. ကထိနျ သင်ျကနျးအဖွဈ နဲ့တော့ အပွီး လှူမပဈခဲ့ရပါဘူး။ ခတ်ေတခဏ အပျရုံပဲ အပျနှံထားခဲ့ရမှာပါ။ ကြောငျးမှာသှားထားရုံပဲ ထားပွီး မလှူသေးရငျ သင်ျကနျးတှကေို သံဃာက မပိုငျသေးပါဘူး။ အလှူရှငျ တှကေပဲ ပိုငျပါတယျ။
ကထိနျ သင်ျကနျးအဖွဈနဲ့ အပွီး အပိုငျ နှုတျမွှကျပွီး လှူပဈခဲ့ရငျတော့..တကယျ ကထိနျခငျးမဲ့ ရကျအထိ စောငျ့နလေို့ မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီနမှေ့ာပဲ ခကျြခငျြး ကထိနျခငျး လိုကျရပါမယျ။ နကေူ့းသှားရငျ " သင်ျကနျသိုး" ဖွဈသှားတဲ့အတှကျ ကထိနျခငျးလို့ မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီကြောငျးတိုကျ အဲဒီနှဈ အတှကျ ပွီးပါပွီ။ ကထိနျခငျးလို့ လုံးဝရတော့ပါဘူး။
တနှဈမှာ တဈလ၊ တဈလမှာ တဈရကျ၊ တဈရကျမှာတဈကွိမျပဲ ကထိနျသင်ျကနျး လှူခှငျ့ရှိတာဆိုတော့... နောကျထပျလညျး ကထိနျသင်ျကနျး အလှူခံလို့ မရတော့ပါဘူး။
တခြို့က .. ကထိနျ ရကျမှာ မအားလို့၊ မလာနိုငျလို့ဆိုပွီး .. ကထိနျ မတိုငျခငျ ရကျခပျစောစော ကတညျးက ကထိနျသင်ျကနျးကို ကွိုလှူ ထားခငျြကွပါတယျ။ အဲဒီလို ကွိုလှူထားလို့ မရပါဘူး။ သကျဆိုငျရာ ကြောငျးတိုကျ သံဃာကလညျး ကွို အလှူခံထားလို့ လုံးဝမရပါဘူး ကွိုလှူထားတဲ့ သင်ျကနျးနဲ့ကထိနျခငျးရငျ အဲဒီကထိနျဟာ.. "ကထိနျအတု၊ ကထိနျအငျ" ပဲ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
တခြို့က အရုဏျ မတကျခငျ ( ကြီးမနိုးခငျ ) ကထိနျသင်ျကနျး လှူတဲ့ " ကြီးမနိုး ကထိနျ" က ပိုမွတျတယျလို့ ယူဆပွီး ၊အရုဏျ မတကျခငျ ( ကြီးမနိုးခငျ ) ကထိနျသင်ျကနျး လှူဒါနျးတတျကွပါသေးတယျ။ အရုဏျ မတကျခငျ ကထိနျ သင်ျကနျးလှူလိုကျရငျ အရုဏျမတကျခငျဘဲ ကထိနျခငျးရပါတယျ။ အရုဏျတကျပွီးသှားမှ ကထိနျခငျးရငျ သင်ျကနျးသိုးသှားလို့ ကထိနျ အထမမွောကျပွနျပါဘူး။ အရုဏျ တကျတာနဲ့ တဈပွိုငျနကျ နောကျတဈရကျ ကူးသှားပါပွီ။
အရုဏျအမီ ကထိနျခငျးဖို့ အခြိနျ မလုံလောကျတဲ့အတှကျ အဲဒီလို လှူတာမြိုး လုံးဝ ရှောငျကွဉျ သငျ့ပါတယျ။
( ၃ ) "သံဃိက သင်ျကနျး"
ရဟနျးတဈပါးပါးကို လှူဒါနျးထားလို့ အဲဒီရဟနျးတဈပါးတညျးကပဲ ပိုငျဆိုငျတဲ့ ပုဂ်ဂလိက သင်ျကနျးနဲ့ ကထိနျခငျးလို့မရပါဘူး။ သံဃာအားလုံးကို လှူဒါနျးထားလို့ သံဃာ အားလုံးပိုငျဆိုငျတဲ့ သံဃိက သင်ျကနျးနဲ့ပဲ ကထိနျခငျးလို့ရပါတယျ။ သံဃာအမြား ပိုငျဆိုငျတဲ့ "သံဃိက သင်ျကနျး” နဲ့ပဲ ကထိနျခငျးခှငျ့ ရှိပါတယျ။
မိမိကွညျညိုတဲ့ ဘုနျးကွီး တဈပါးပါး၊ ဆရာတျောတဈပါးပါးကို ဒီဆရာတျောကွီး ငါကွညျညိုလို့ ကထိနျသင်ျကနျး လှူလိုကျဦးမယျ ဆိုပွီးတော့ ..
"ဆရာတျောကို တပညျ့တျော ကထိနျ သင်ျကနျး လှူပါတယျဘုရား" ၊" ဘုနျးကွီးကို ကထိနျ သင်ျကနျး လှူပါတယျ ဘုရား”လို့ မိမိ ကွညျညိုတဲ့ ရဟနျးတျော တဈပါးပါးကို ပုဂ်ဂလိက အနနေဲ့ ကထိနျသင်ျကနျး လှူဒါနျးခှငျ့ မရှိပါဘူး။
တခြို့က ကထိနျရာသီမှာ လှူတဲ့ သင်ျကနျးမှနျသမြှ ကထိနျသင်ျကနျးပဲ ထငျပွီး ...
" အရှငျ ဘုရားအတှကျ ကထိနျ သင်ျကနျးပါ ဘုရား" ဆိုပွီး ...လာလာ လှူလရှေိ့ပါတယျ။
အဲဒီလို လှူလို့ လုံးဝ မရပါဘူး။ ရဟနျး တဈပါးခငျြးကို “ကထိနျ သင်ျကနျး”ဆိုပွီး လုံးဝလှူလို့မရပါဘူး။ အဲဒီလိုရဟနျးတဈပါးပါးကို လှူတဲ့ သင်ျကနျးကိုလညျး ကထိနျရာသီမှာ လှူပမေယျ့ “ကထိနျသင်ျကနျး” လို့ မချေါပါဘူး။
ပုဂ်ဂိုလျ တဈပါးပါးကို လှူဒါနျးလိုကျတဲ့ အဲဒီ သင်ျကနျးနဲ့လညျး ကထိနျခငျးလို့ မရပါဘူး။ ခငျးလညျးပဲ ကထိနျမအောငျမွငျပါဘူး။သံဃာကို လှူဒါနျးတဲ့ သင်ျကနျးနဲ့သာလြှငျ ကထိနျခငျးခှငျ့ ရှိပါတယျ။ ကထိနျ အောငျမွငျထမွောကျ နိုငျပါတယျ။
ကထိနျသင်ျကနျး "လှူဒါနျးနညျးက နှဈမြိုး" ရှိပါတယျ။
( ၁ ) ကထိနျခငျးမယျ့ ကြောငျးမှာ သှားလှူတဲ့နညျး ၊
( ၂ ) ကိုယျ့အိမျ၊ ကိုယျဋ်ဌာန၊ တဈနရောရာမှာ ပငျ့လှူတဲ့နညျးတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကထိနျခငျးမဲ့ ကြောငျးမှာ သှားလှူရငျတော့ ... " ဤကထိနျ သင်ျကနျးကို သံဃာအား လှူပါ၏ " လို့ဆိုပွီး ...လှူလိုကျရုံနဲ့ လုံလောကျပါတယျ။
သံဃာအား လှူတယျဆိုပမေဲ့ ကထိနျခငျးမဲ့ ကြောငျးမှာရှိတဲ့ သံဃာနဲ့ပဲ သကျဆိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ နရော၊ ကိုယျ့ဋ်ဌာနကို ပငျ့ပွီး လှူမယျဆိုရငျတော့.... "ဘယျကြောငျးတိုကျမှာ ကထိနျခငျးဖို့ အတှကျ သံဃာအားလှူပါ၏" လို့ ...ကထိနျခငျးမဲ့ " ကြောငျးတိုကျ နာမညျ" ကို တရားဝငျထညျ့ဆိုပွီး လှူဒါနျးရပါတယျ။ ဒါမှသာကိုယျရညျစူးတဲ့ ကြောငျးတိုကျ သံဃာက ကထိနျခငျးခှငျ့ ရမှာပါ။
ကြောငျးတိုကျ နာမညျ ထညျ့မဆိုဘဲ နဲ့ "သံဃာအားလှူပါ၏" လို့ ရိုးရိုးလေး ဆိုပွီး လှူလိုကျရငျ အခမျးအနားကို ကွှလာတဲ့ " ဆယျ့နှဈတောငျ ပတျလညျအတှငျး" က ..တခွား ပငျ့သံဃာ အားလုံးနဲ့ သကျဆိုငျသှားတဲ့အတှကျ ရညျစူးရာ ကြောငျးတိုကျမှာ ကထိနျခငျးခှငျ့ မရှိတော့ပါဘူး။
ရဟနျးတဈပါးတညျးကို ပငျ့ပွီး “သံဃာအား လှူပါ၏” လို့ ဆိုလှူလိုကျရငျလညျး အဲဒီရဟနျးက အဲဒီသင်ျကနျးကိုယူပွီး တခွား ကြောငျးတိုကျ တဈခုကို ဝငျလိုကျမိတာနဲ့ တဈပွိုငျနကျတညျး ဝငျမိတဲ့ ကြောငျးတိုကျ သံဃာက အဲဒီသင်ျကနျးကို ပိုငျဆိုငျသှားပွနျလို့ ရညျစူးရာကြောငျးတိုကျမှာ ကထိနျခငျး မရတော့ပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့နရော၊ ကိုယျဠာန ပငျ့လှူသူတိုငျး ကထိနျခငျးလိုတဲ့ “ကြောငျးတိုကျ နာမညျ”ကို တရားဝငျထညျ့ဆိုပွီးမှ လှူသငျ့ပါတယျ။
ကထိနျခငျးမဲ့ ကြောငျးတိုကျမှာ သှားလှူတဲ့ အခါ.. " သံဃာအား”လို့ ထညျ့မဆိုပဲ .. " ဤကထိနျ သင်ျကနျးကို လှူပါ၏" လို့ ရိုးရိုးပဲ ဆိုလိုကျရငျလညျး အဲဒီ ကထိနျ သင်ျကနျးဟာ ကြောငျးတိုကျမှာ ရှိတဲ့ သံဃာ အားလုံး ပိုငျဆိုငျတဲ့ သင်ျကနျး (သံဃိက သင်ျကနျး)ဖွဈသှားပါတယျ။ “သံဃာအား”လို့ ထညျ့ဆိုလိုကျတော့လညျး ပိုပွညျ့စုံ သှားတာပေါ့။
ရဟနျး တဈပါးတညျး ဝါဆိုတဲ့ ကြောငျးတိုကျမှာ" သံဃာအား လှူပါ၏" လို့ ရှတျဆိုလြှောကျထားပွီးလှူတဲ့ ကထိနျသင်ျကနျးဟာ.." သံဃာအား”လို့ ပါတဲ့အတှကျ အရပျ လေးမကျြနှာမှာ ရှိရှိသမြှ သံဃာအားလုံးနဲ့ သကျဆိုငျပမေဲ့ ကြောငျးတိုကျမှာ ဝါဆိုတဲ့ ရဟနျးတဈပါးကပဲ ပိုငျဆိုငျပါတယျ။
တဈပါးထကျ ပိုမြားတဲ့ ရဟနျးတျောတှေ ဝါဆိုတဲ့ကြောငျးတိုကျ တှမှောလညျး ထိုနညျးတူပါပဲ။ "သံဃာအား လှူပါ၏" ဆိုတဲ့ သင်ျကနျးမှနျသမြှ အရပျလေးမကျြနှာ သံဃာ(စာတုဒ်ဒိ သံဃာ)နဲ့ သကျဆိုငျရုံပဲ သကျဆိုငျပါတယျ။ ပိုငျတဲ့ အခါမှာတော့ ကြောငျးတိုကျ သံဃာ(အာရာမ သံဃာ) ကပဲ ပိုငျပါတယျ။ ကြောငျးတိုကျ ပွငျပက သံဃာဟာ ဆိုငျသာဆိုငျ ၊ မပိုငျတဲ့သံဃာပါ။
ကိုယျလှူတဲ့ သင်ျကနျးကို သံဃာတျောတှေ ဘယျလိုပဲဆိုငျဆိုငျ၊ဘယျလိုပဲ ပိုငျပိုငျ ကိုယျကတော့ သံဃာအားလုံးကို ရညျမှနျးပွီး လှူဒါနျးရမှာ ပါပဲ။ "အရပျလေး မကျြနှာမှာ ရှိရှိသမြှ သံဃာအားလုံး ၊ သာသနာတျောမှာ ရှိခဲ့ပွီး၊ ရှိနဆေဲ၊ ရှိလတ်တံ့ သံဃာအားလုံးကို လှူဒါနျးပါတယျ" လို့ အာရုံပွုပွီး...
"သံဃဿ ဒမေ = သံဃာအား လှူပါ၏"လို့ ရှတျဆို လှူဒါနျးလိုကျရငျ ကိုယျလှူလိုကျတဲ့ သင်ျကနျးဟာ " တဈသာသနာလုံး၊ တဈလောကလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပုထုဇဉျသံဃာ၊ အရိယာ သံဃာ သံဃာအားလုံးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ သံဃိက သင်ျကနျး" ဖွဈသှားပါတယျ။ အမြားပိုငျ သံဃိက သင်ျကနျးနဲ့ပဲ ကထိနျခငျးလို့ ရပါတယျ။ တဈပါးပိုငျ ပုဂ်ဂလိက သင်ျကနျးနဲ့ ကထိနျခငျးလို့ မရပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ တကယျ ကထိနျခငျးတဲ့ အခြိနျမှာတော့ “အမြားပိုငျ သံဃိက သင်ျကနျး”ကို “တဈပါးပိုငျ ပုဂ်ဂလိကသင်ျကနျး” ဖွဈအောငျ ပွနျလုပျလိုကျ ရပါတယျ။
သံဃာက ကထိနျခငျးလို့ မရပါဘူး။ ပုဂ်ဂိုလျကပဲ ကထိနျခငျးလို့ ရပါတယျ။ သံဃာက ကထိနျ သင်ျကနျးပေးရုံပဲ ပေးနိုငျပါတယျ။ သိမျထဲမှာ သံဃာတျောတှေ စုဝေးပွီး ကထိနျခငျး ထိုကျတဲ့ ရဟနျးတဈပါးကို ဉတျကမ်မဝါ နဲ့ ကထိနျသင်ျကနျး ပေးလိုကျရပါတယျ။ ကထိနျ သင်ျကနျးကို ပုဂ်ဂလိကအဖွဈ ပိုငျဆိုငျသှားတဲ့ အဲဒီ ရဟနျးကမှ ကထိနျခငျးရတာပါ။
ကထိနျ သင်ျကနျးကို သိမျထဲမှာပဲ ပေးရပမေဲ့ ကထိနျကိုတော့ သိမျထဲမှာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ သိမျအပွငျမှာပဲ ဖွဈဖွဈ ခငျးလို့ရပါတယျ။ ရဟနျးတဈပါး ခငျးတဲ့ ကထိနျကို သံဃာက ဝမျးမွောကျ ဝမျးသာ အနုမောဒနာ ပွုလိုကျရငျ သံဃာကလညျး ကထိနျ ခငျးပွီးသား ဖွဈသှားတာပါပဲ။
ကထိနျခငျးခွငျး ဆိုတဲ့ ဝိနညျးကံဟာ သံဃာ့ကံ မဟုတျ၊ ပုဂ်ဂလကံ ဆိုပမေဲ့ သံဃာကပဲ ကထိနျ သင်ျကနျးပေးရ၊ ကထိနျခငျးပွီးရငျလညျး သံဃာအားလုံးက အနုမောဒနာပွုတဲ့ သံဃာမှာလညျး ကထိနျ အာနိသငျရတဲ့ အတှကျ သံဃာ့ကိစ်စ၊ သံဃာ့အလုပျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
“သံဃိက သင်ျကနျး”ကို “ပုဂ်ဂလိက သင်ျကနျး”အဖွဈ ကထိနျခငျးမဲ့ ရဟနျးကိုပေးတာက သံဃာတျောတှရေဲ့ အပိုငျး ဖွဈပါတယျ။
ကထိနျ အလှူရှငျတှရေဲ့ အပိုငျးကတော့ “သံဃိက သင်ျကနျး”အဖွဈပဲ လှူဒါနျးရမှာပါ။ ကထိနျခငျးတဲ့ အခြိနျ ပုဂ်ဂလိက သင်ျကနျး လုပျမဲ့ အတူတူပဲဆိုပွီး ... နဂိုကတညျးက ပုဂ်ဂလိက သင်ျကနျးအဖွဈ မလှူဒါနျးရပါဘူး။ လှူဒါနျးခဲ့ရငျ ပုဂ်ဂလိက သင်ျကနျးကို သံဃာက ကထိနျခငျးမဲ့ ရဟနျးကို ပေးလို့ မရတော့တဲ့ အတှကျ ကထိနျခငျးလို့ မရတော့ပါဘူး။
သံဃိက သင်ျကနျးကိုပဲ သံဃာက ကထိနျခငျးမယျ့ ရဟနျးကို ပေးလို့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကထိနျ အလှူရှငျတှေ အနနေဲ့ မိမိတို့ ကွညျညိုတဲ့ ဆရာတျော တဈပါးပါး၊ ရဟနျး တဈပါးပါးကို ကထိနျသင်ျကနျး ရစခေငျြတဲ့စိတျ လုံးဝမထားဘဲ ၊ " ဒီကထိနျ သင်ျကနျးဟာ သံဃာ အားလုံးအတှကျ”လို့ပဲ ရညျမှနျးပွီး ... သံဃာပိုငျ သံဃိက စဈစဈဖွဈအောငျ လှူဒါနျးကွရပါမယျ။
နောကျတဈခကျြ ဖွညျ့စှကျရမယျဆိုရငျတော့ ကထိနျသင်ျကနျးဟာ “ကိုယျပိုငျ သင်ျကနျး” ဖွဈရပါမယျ။ ခတ်ေတခဏ ငှားယူလာတဲ့ သင်ျကနျး (“အငှား”သင်ျကနျး)နဲ့ ကထိနျခငျးရငျ ကထိနျစဈစဈ မဖွဈပါဘူး။
အမှနျတကယျ ပိုငျဆိုငျတဲ့ သင်ျကနျး ( ကိုယျပိုငျ သင်ျကနျး)နဲ့ ကထိနျ သင်ျကနျး လှူတဲ့ အခါမြိုးမှာ ကထိနျခငျးတဲ့ အခိုကျကလေး ခတ်ေတခဏ ငှားတဲ့ သဘောမြိုး မဖွဈအောငျ အထူး သတိပွု ရပါမယျ။
ကထိနျခငျးခှငျ့ ရှိတဲ့ ကာလကတော့ ... " သီတငျးကြှတျ လပွညျ့ကြျော( ၁ )ရကျကနေ တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့နေ့ အထိ တဈလ( ၂၉-ရကျ )” ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈလ အတှငျးမှာပဲ ကထိနျ သင်ျကနျးလှူခှငျ့ ရှိပါတယျ။ ဒီတဈလ အတှငျးမှာ ခငျးမှလညျး “ကထိနျစဈစဈ”ွ ဖဈပါတယျ။
ကထိနျခငျးဖို့အတှကျ သံဃာက သိမျထဲမှာ သင်ျကနျးပေး တဲ့ ကံ ပွုရတဲ့အတှကျ ကထိနျကံ အောငျမွငျဖို့ အနညျးဆုံး သံဃာ( ၅ )ပါး ရှိရပါတယျ။ ကထိနျ သင်ျကနျးပေးတဲ့ ကံပွုတဲ့ သံဃာက ( ၄ )ပါး၊ ကထိနျ သင်ျကနျးခံယူသူက ( ၁ )ပါး၊ စုစုပေါငျး ( ၅ )ပါး အနညျးဆုံး ရှိမှ ကထိနျကံ အောငျမွငျပါတယျ။ သင်ျကနျး ပေးဖို့ အတှကျသာ သံဃာ လိုတာပါ။ သင်ျကနျးပေးပွီးလို့ ကထိနျခငျးတဲ့ အခါမှာတော့ သံဃာ မလိုပါဘူး။
တဈပါးတညျး ဝါဆိုတဲ့ ကြောငျးမှာ တဈပါးတညျး ကထိနျခငျးလညျး ရပါတယျ။ အနုမောဒနာ ပွုရမဲ့ ရဟနျးတဈပါး ချေါထားပွီး၊ နှဈပါးကထိနျခငျးလညျး ရပါတယျ။ သင်ျကနျးပေးတဲ့ သံဃာတှေ စုံနတေုနျးမို့ သံဃာနဲ့ ကထိနျခငျးလိုကျလညျး ရတာပါပဲ။ ရဟနျး တဈပါး ခငျးတဲ့ ကထိနျကို ဝါဆိုတူ ကြောငျးတိုကျအတှငျးက ရဟနျးတျောတှပေဲ အနုမောဒနာ ပွုစရာ လိုပါတယျ။ ကိုရငျ သာမဏတှေေ ကတော့ အနုမောဒနာ ပွုစရာ မလိုပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ တဈကြောငျးတိုကျတညျး အတူ ဝါဆိုကွတဲ့ သီတငျးသုံးဖျေါ ဘဝတူအခငျြးခငျြး ဖွဈတဲ့အတှကျ ကထိနျ အာနိသငျ သင်ျကနျး (ကထိနျရံ သင်ျကနျး)တှကေို ကိုရငျတှကေိုလညျး အညီအမြှ ခှဲဝပေေးရပါမယျ။ ကိုရငျတှလေညျး အာနိသငျ သင်ျကနျး( ကထိနျရံ သင်ျကနျး) ရပိုငျခှငျ့ ရှိပါတယျ။
တခြို့က ကြောငျးဥပစာ ပရိဝုဏျ အရံအတား တူတဲ့ ကြောငျးတိုကျ တဈတိုကျတညျးမှာ နှဈကြောငျး၊ သုံးကြောငျး စသညျခှဲပွီး သီခွားစီ ဝါဆို တတျကွပါတယျ။ ကြောငျးတိုကျကွီး တဈခုတညျးမှာ ဘယျနှဈကြောငျးပဲ ခှဲဝါဆိုဆို ကထိနျခငျးရငျတော့ တဈကြောငျး တိုကျလုံးပေါငျးပွီး၊ ကထိနျ တဈခုတညျးပဲ ခငျးရပါမယျ။ ဒါမှကထိနျစဈစဈ ဖွဈပါမညျ။
Credit : အရှငျဉာဏာဝုဓ (ဉာဏရောငျခွညျဆရာတျော) ဦးခိုကျပါ၏အရှငျဘုရား
ဝမြှေပေးတဲ့ ကိုသကျကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ
ဗုဒ်ဓသာသနံ စိရံ တိဋ်ဌတု ။
" ကထိန် "
" စုပေါင်း ဘုံ ကထိန် "
" ကထိန် သင်္ကန်း "
" ကထိန် သင်္ကန်းကပ်တယ် "
" ကထိန်ခင်းတယ် " စတဲ့ ... စကားချပ်တွေကတော့ ကထိန် နဲ့ပတ်သက်ရင်အမြဲကြားလေ့ရှိကြပါတယ်။
သာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုကတော့ ..
"ကထိန် " ဆိုလို့သာ.. မိမိတို့ရဲ သဒ္ဓါ တရားတွေ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာ လှူလိုက်၊ တမ်းလိုက် ကြတာပါပဲ။ " ကထိန် " နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လှူဒါန်းရတဲ့ အကြောင်းကို မသိကြသူကများကြပါတယ်။
"ကထိန်" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ.. "ကထိန" ဟူသော ပါဠိ ကိုမြန်မာမှု ပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
"ကထိန်" ဟူသည်ကား ခိုင်မြဲခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်ခြင်ြး ဖစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း လွန်မြောက်ခြင်း ကင်းလွတ်ခြင်းဟု ညွှန်းဆို ကြပါသည်။
ကထိန်ခင်းတယ် ဆိုတာ... " ရဟန်းတော်တွေရဲ့ အလုပ်ပါ " ကထိန်ခင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်. ကထိန်ခင်းတဲ့ အလုပ်ကို လူဝတ်ကြောင်ဒကာ၊ ဒကာမတွေက လုပ်ကြတယ်လို့ လူအများစုက ထင်နေကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ... ကထိန်းခင်းတဲ့ အလုပ်ဟာ .. လူဝတ်ကြောင် ဒကာ ဒကာမတွေရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ရဟန်းတော်တွေရဲ့ အလုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဟန်းတော်တွေကပဲ "ကထိန်ခင်း " ကြတာပါ။
ဒါပေမဲ့.. ရဟန်းတော်တွေ " ကထိန်ခင်းမဲ့သင်္ကန်းကို အများအားဖြင့်တော့ လူဝတ်ကြောင် ဒကာ၊ ဒကာမတွေကပဲ လှူဒါန်းကြပါတယ်။
အဲဒီလို ကထိန်ခင်းမဲ့သင်္ကန်း လှူဒါန်းတာကိုပဲ "ကထိန်ခင်းတယ်" လို့ တင်စားပြီး ပြောကြရင်းက .. ကထိန် သင်္ကန်း လှူတဲ့သူတွေကို " ကထိန်ခင်းတဲ့ သူတွေ" လို့ ခေါ်ဝေါ် နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်စင်စစ်တော့ ... လူဝတ်ကြောင် ဒကာ၊ ဒကာမတွေဟာ ကထိန်ခင်းတဲ့ သူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ "ကထိန် သင်္ကန်း " လှူတဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ပြီးတော့... ဒီ " ကထိန် သင်္ကန်း" ကို လူဝတ်ကြောင် ဒကာ၊ ဒကာမေ တွ ကပဲ လှူခွင့်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။
* ရဟန်း သာမဏေတွေလည်း လှူခွင့် ရှိပါတယ်။
* သီလရှင်တွေလည်း လှူခွင့် ရှိပါတယ်။
* လူသားတွေပဲ လှူခွင့်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။
* နတ်တွေလည်း လှူခွင့် ရှိပါတယ်။
* ဗြဟ္မာတွေလည်း လှူခွင့် ရှိပါတယ်။
* နဂါး ဂဠုန်တွေလည်း လှူခွင့် ရှိပါတယ်။
ကျမ်းဂန်ထဲမှာ ... ကထိန် သင်္ကန်း လှူခွင့်ရှိသူကို .. "လူရယ်၊ နတ်ရယ်၊ သီတင်း သုံးဖေါ်( ၅ )ဦးရယ်" လို့ ဆိုပြီး ..ပုဂ္ဂိုလ်( ၇ )မျိုး ကို တိုက်ရိုက် ပြထားပါတယ်။
သီတင်းသုံးဖေါ်( ၅ )ဦးဆိုတာ ... "ရဟန်း၊ ရဟန်းမ၊ သာမဏေ၊ သာမဏေ နဲ့ သိက္ခမာန်" တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
"သိက္ခမာန် " ဆိုတာ ... ဘိက္ခုနီမ(ရဟန်းမ) မဝတ်မီ သိက္ခာပုဒ် ( ၆ )ပါးကို ( ၂ )နှစ်တိတိ ကျင့်နေတဲ့ "သာမဏေ တစ်မျိုး "ကို ခေါ်တာပါ။
ပဓာန နည်းအားဖြင့် တိုက်ရိုက်ပြထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်( ၇ )မျိုးထဲမှာ .. နဂါး၊ ဂဠုန်စတဲ့ တိုက်ရိုက်ပြမထားတဲ့ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ အသိဉာဏ်ရှိသူ မည်သူမဆို ကထိန်သင်္ကန်း လှူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရဟန်းတော်၊ သံဃာတော်တွေကို ကထိန်သင်္ကန်း လှူခွင့်ရှိသူများ စာရင်းမှာ တိုက်ရိုက် ပြထားတဲ့ အတွက် .. ရဟန်းတော်၊ သံဃာတော်တွေ ကိုယ်တိုင် လှူတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ ကထိန် ခင်းကောင်းပါတယ်။ ကထိန်ခင်းခဲ့ရင်လည်း ကထိန် အထ မြောက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့..... ရဟန်းတော် ကိုယ်တိုင် " အလှူခံတဲ့ သင်္ကန်း" နဲ့တော့ ကထိန်မခင်း ကောင်းပါဘူး။ အကယ်၍ ကထိန်ခင်းခဲ့ရင် လည်း ကထိန်အထ မမြောက်ပါဘူး။
" ကထိန်" တစ်ခု အထမြောက်ဖို့ အတွက် ... ကထိန်သင်္ကန်း လှူတဲ့သူ ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ အချက်က အဓိက မကျပါဘူး။
လှူတဲ့ ကထိန် သင်္ကန်း ဟာ.. " ဘယ်လို သင်္ကန်းလဲ" ဆိုတဲ့အချက်က အဓိက ကျပါတယ်။
ကထိန်တစ်ခု အထမြောက်ဖို့အတွက် ... လှူတဲ့ "ကထိန် သင်္ကန်း" ဟာ….
( ၁ ) မိုးကျသင်္ကန်း လည်း ဖြစ်ရပါမယ်။
( ၂ ) မသိုး သင်္ကန်း လည်း ဖြစ်ရပါမယ်။
( ၃ ) သံဃိက သင်္ကန်း လည်း ဖြစ်ရပါမယ်။
သင်္ကန်း သုံးထည် ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်္ကန်း တစ်ထည်တည်းကပဲ
( ၁ ) " မိုးကျ " ဖြစ်ခြင်း၊
( ၂ ) "မသိုး " ဖြစ်ခြင်း၊
( ၃ ) " သံဃိက " ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ ... အရည်အသွေး( ၃ )မျိုးနဲ့ ပြည့်စုံ ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
( ၁ )မိုးကျ သင်္ကန်း
မိုးရေ မိုးပေါက်တွေဟာ ဘယ်သူ့ရဲ့ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုမှ မပါဘဲ ၊ မိုးကောင်းကင်အပေါ်ကနေ အလိုအလျောက် ကျလာသလို... ကထိန်သင်္ကန်းဟာလည်း ..ကထိန်ခင်းမဲ့ ကျောင်းတိုက်က ရဟန်းတော်တွေထဲက ဘယ် ရဟန်းတော်ရဲ့ တိုက်တွန်း လှုံ့ဆော်မှုမှ မပါဘဲ အလှူရှင်က သူ့သဒ္ဓါ တရားနဲ့သူ အလိုအလျောက် လာလှူတဲ့ သင်္ကန်း ဖြစ်ရပါမယ်။
ကိုယ် လုံးဝ မတိုက်တွန်းဘဲ ...သူ့အလိုအလျောက် ရတဲ့ သင်္ကန်း၊ ကိုယ်လုံးဝ အလှူမခံဘဲ ... သူ့အလိုအလျောက် လာလှူတဲ့ သင်္ကန်းကို မိုးပေါ်က ရုတ်တရက် ကျလာတဲ့ အရာဝတ္ထုနဲ့ တူလို့ .. မိုးကျ သင်္ကန်း (မိုးပေါ်ကျ သင်္ကန်း) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ရဟန်းတော်၊ သံဃာတော်တွေဟာ " မိခင်ရင်း၊ ဖခင်ရင်း"ဆီကတောင်မှ ကထိန် သင်္ကန်း " အလှူမခံ" ကောင်းပါဘူး။ အဲဒီလို မိခင်ရင်း၊ ဖခင်ရင်းဆီက အလှူခံလို့ ရလာတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်ခင်းရင်လည်း ကထိန် အထ မမြောက်ပါဘူး။
ပြီးတော့.. ဥပမာ ..ရဟန်းတော်က မိဘကျေးဇူး အထူး ဆပ်ချင်လို့ဆိုပြီး ..ထူးခြားတဲ့ ကထိန် အလှူ ကုသိုလ်ကြီး မိဘနှစ်ပါးရစေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ မိဘကို ကထိန် အကြောင်းတွေ ပြောပြပြီး တိုက်ရိုက်နည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကထိန်သင်္ကန်း အလှူခိုင်းတယ်ဆိုရင် အဲဒီသင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်ခင်းပေမဲ့ ကထိန် အထ မမြောက်တော့တဲ့အတွက် မိဘ ကျေးဇူးလည်း အထူးဆပ်ရာ မရောက်တော့ပါဘူး။ မိဘနှစ်ပါးလည်း ထူးခြားတဲ့ ကထိန် အလှူကုသိုလ်ကြီးမရတော့ပါဘူး။
မိမိ ဝါဆို တဲ့ ကျောင်းတိုက်ရဲ့ ကထိန်အတွက် အလှူမခံကောင်းဘူးလို့ ပြောတာပါ။ ရဟန်းသံဃာဟာ မိမိခင်းမဲ့ကထိန်အတွက် ဘာလုပ်ပေးပါ၊ ညာလုပ်ပေးပါ ဆိုရင်တော့.. ကထိန်အထမမြောက်ဘူး ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြား ကျောင်းတိုက်ရဲ့ကထိန် အတွက်ဆိုရင်တော့ လှူဖို့ တိုက်တွန်း ကောင်းပါတယ်။ တိုက်တွန်းလို့ ရပါတယ်။ လိုအပ်ရင် တိုက်တွန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကထိန်သင်္ကန်း လှူခွင့် ရှိသူတွေထဲမှာ ရဟန်းတော်တွေလည်း ပါတဲ့အတွက် ..ရဟန်း တစ်ပါးပါးက ဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီး ၊ တပည့်ဒကာ ဒကာမတွေနဲ့ တခြားကျောင်းတိုက် တစ်ခုခုမှာ ကထိန်သွားခင်း တယ် ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ...ကထိန်ခင်းမဲ့ ကျောင်းတိုက်က ရဟန်းတော်တွေကိုယ်တိုင်ကတော့ ..ကိုယ့်ကျောင်း ကထိန်အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ကထိန် သင်္ကန်းလှူဖို့ မတိုက်တွန်း ကောင်းပါဘူး။
" ဒီနှစ် ကထိန် ဘယ်ရက်လဲ"၊
" ဒီနှစ်လည်း ဘုံကထိန်ပဲလား"
" ဒီနှစ် ကထိန်သင်္ကန်း " လှူဖို့ ပြောထားတဲ့သူမရှိသေးဘူး၊
" ကထိန်ရာသီတော့ ရောက်လာပြန်ပြီနော်" . . . စသည် စသည်အားဖြင့်..ဘယ်လို အရိပ်နိမိတ်မျိုး ပြပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုပရိယာယ် စကားမျိုး ပြောပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကထိန်ခံ ရဟန်းတော်တွေ ကိုယ်တိုင် ကထိန် သင်္ကန်း အလှူမခံ ကောင်းပါဘူး။
ကထိန်ခင်းမဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေက ကထိန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာစကားမှ မစ,ရသေးဘဲနဲ့ ကျောင်းတိုက် ရဟန်းတော်ထဲက တစ်ပါးပါးက ကထိန်အကြောင်း မစမိအောင် အထူး သတိပြုရပါမယ်။
ဒကာ ဒကာမတွေက ၊ ဘာမှ မလျှောက်ရသေးဘဲနဲ့ .. " ဒီနှစ် ကထိန် ဘယ်ရက်လဲ" လို့ ကိုယ့်ဘက်က စမမေးသင့်သလို... "ဒီနှစ်တော့ ဒီရက်မှာ ကထိန်ခင်းရင် အဆင်ပြေမယ်" ထင်တယ်လို့ ..ကိုယ်က စပြီး ကထိန်ရက် သတ်မှတ်ပေးမျိုးလည်း လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
ကထိန်သင်္ကန်းဟာ.. " အတိ ဥက္ကဋ္ဌ = အလွန် မြင့်မြတ်တဲ့ သင်္ကန်း" ဖြစ်ရမယ်တဲ့...။
" အလွန် မြင့်မြတ်တဲ့ သင်္ကန်း" ဆိုတာ တောင်းရမ်းမှု၊ တိုက်တွန်းမှု မပါဘဲ အလိုအလျောက်ရတဲ့ သင်္ကန်းကို ပြောတာပါ။ တောင်းရမ်းခြင်း၊ တိုက်တွန်းခြင်းဆိုတဲ့ အပြစ်လုံးဝ ကင်းပြီး၊ အလွန့်အလွန် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ သင်္ကန်းကို ..."မိုးကျ သင်္ကန်း”လို့ ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကျောင်းကို ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်မှာ ဘယ်သူ ကထိန်လာခင်းမယ်ဆိုတာ လုံးဝ ကြိုမသိဘဲ ကြိုတင် အသိပေးမထားဘဲ ၊ လာလှူတဲ့ သင်္ကန်း၊ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက်ရောက်လာတဲ့ သင်္ကန်းဟာ .."မိုးကျ သင်္ကန်း" အစစ်ဆုံးပါပဲ။
"မတောင်းဘဲရမှ အတိ ဥက္ကဋ္ဌ ( အလွန် မြင့်မြတ်တယ် ) " ဆိုတာကိုကြည့်ပြီး ... ဘယ်ပစ္စည်း လာဘ်လာဘ မဆို ၊ ဘယ်ရာထူး ဋ္ဌာနန္တရ မဆို ကိုယ်က မတောင်းရဘဲ အလိုအလျောက် ရမှ ပိုတန်ဖိုး ရှိတယ်။ ပိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့ ကောက်ချက် ချနိုင်ပါတယ်။
( ၂ ) " မသိုး သင်္ကန်း"
သန့်ရှင်း လတ်ဆပ်တဲ့ ထမင်းကောင်း၊ ဟင်းကောင်း ( မသိုးထမင်း၊ မသိုးဟင်း ) ဆိုတာ ချက်ပြီး တစ်ရက်မှ မကူးသေးတဲ့၊ ဒီနေ့မှ ချက်ထားတဲ့ ထမင်းဟင်း ဖြစ်ရသလို ကထိန် သင်္ကန်းဟာလည်း လှူပြီး တစ်ရက်မှ မကူးသေးတဲ့၊ ဒီနေ့ လှူထားတဲ့ သင်္ကန်း ဖြစ်ရပါမယ်။
ချက်ပြီး တစ်ရက် ကျော်သွားတဲ့ ထမင်းဟင်း၊ နေ့ကူးသွားတဲ့ ထမင်းဟင်းကို တကယ် သိုးသိုး မသိုးသိုးထမင်းသိုး၊ ဟင်းသိုးလို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ အအေးခန်းထဲ၊ ရေခဲ သေတ္တာထဲ ထည့်ထားလို့ ချက်ချင်းသိုးမသွားသေးလည်း နာမည်ကတော့ “ထမင်းသိုး၊ ဟင်းသိုး" ပါပဲ။
လှူပြီး တစ်ရက်ကျော်သွားတဲ့ သင်္ကန်း၊ နေ့ကူးသွားတဲ့သင်္ကန်းကို " သင်္ကန်းသိုး" လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သင်္ကန်းသိုးနဲ့ လုံးဝ ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။ ကထိန်ခင်းလည်း ကထိန် အထ မမြောက်ပါဘူး။ ( တစ်ရက်မက ကျော်သွားရင်တော့ အထူး ပြောစရာ တောင် မလိုတော့ပါဘူး )
လှူပြီး တစ်ရက်မှ မကျော်သေးတဲ့ သင်္ကန်း၊ နေ့မကူးသေးတဲ့ သင်္ကန်း၊ ဒီနေ့မှ လာလှူတဲ့သင်္ကန်းကို .."မသိုး သင်္ကန်း" လို့ ခေါ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ " မသိုး သင်္ကန်း" နဲ့ခင်းမှ ကထိန် အထ မြောက်ပါတယ်။
ရဟန်းတော်တွေဟာ ကထိန် သင်္ကန်း ဒီနေ့ရရင် ဒီနေ့ပဲ ကထိန်ခင်းရပါတယ်။ အလုပ် မအားလို့၊ အဆင်မပြေသေးလို့ ဆိုပြီး နောက်နေ့မှ ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။ ကထိန်သင်္ကန်း အလှူခံပြီးတဲ့ နေ့ရဲ့ နောက်တစ်နေ့ အရုဏ်မတက်ခင်မှာပဲ ၊ ကထိန်ခင်းခြင်း ကိစ္စ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
ကထိန်သင်္ကန်း အလှူခံပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း ကထိန်ခင်းရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့ အရုဏ်မတက်မချင်း ဘယ်အချိန်မှာ မဆို ကထိန်ခင်းလို့ ရပါတယ်။
"ကထိန် သင်္ကန်းဟာ နေ့မကူးတဲ့ မသိုး သင်္ကန်းဖြစ်ရမယ်"ဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ..တချို့က ကထိန်ရက် မတိုင်ခင် ကထိန် သင်္ကန်းကို ကျောင်းမှာ သွား မထားကောင်းဘူးလို့ ယူဆ နေကြပါတယ်။
လမ်းခရီး ကြုံနေရင်တောင်မှ ကထိန် သင်္ကန်း ကိုင်လျက်တန်းလန်းကြီးနဲ့ ကျောင်းတိုက်ထဲကနေ ဖြတ်မသွားကောင်းဘူးလို့တောင် ထင်နေကြပါတယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။
ကထိန် သင်္ကန်းကိုရော၊ ကထိန်ရံ သင်္ကန်းတွေကိုရော ၊ ကထိန်ရက် မတိုင်ခင် ကျောင်းမှာ သွားထားလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် .. ကထိန် သင်္ကန်းအဖြစ် နဲ့တော့ အပြီး လှူမပစ်ခဲ့ရပါဘူး။ ခေတ္တခဏ အပ်ရုံပဲ အပ်နှံထားခဲ့ရမှာပါ။ ကျောင်းမှာသွားထားရုံပဲ ထားပြီး မလှူသေးရင် သင်္ကန်းတွေကို သံဃာက မပိုင်သေးပါဘူး။ အလှူရှင် တွေကပဲ ပိုင်ပါတယ်။
ကထိန် သင်္ကန်းအဖြစ်နဲ့ အပြီး အပိုင် နှုတ်မြွက်ပြီး လှူပစ်ခဲ့ရင်တော့..တကယ် ကထိန်ခင်းမဲ့ ရက်အထိ စောင့်နေလို့ မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီနေ့မှာပဲ ချက်ချင်း ကထိန်ခင်း လိုက်ရပါမယ်။ နေ့ကူးသွားရင် " သင်္ကန်သိုး" ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ကထိန်ခင်းလို့ မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီကျောင်းတိုက် အဲဒီနှစ် အတွက် ပြီးပါပြီ။ ကထိန်ခင်းလို့ လုံးဝရတော့ပါဘူး။
တနှစ်မှာ တစ်လ၊ တစ်လမှာ တစ်ရက်၊ တစ်ရက်မှာတစ်ကြိမ်ပဲ ကထိန်သင်္ကန်း လှူခွင့်ရှိတာဆိုတော့... နောက်ထပ်လည်း ကထိန်သင်္ကန်း အလှူခံလို့ မရတော့ပါဘူး။
တချို့က .. ကထိန် ရက်မှာ မအားလို့၊ မလာနိုင်လို့ဆိုပြီး .. ကထိန် မတိုင်ခင် ရက်ခပ်စောစော ကတည်းက ကထိန်သင်္ကန်းကို ကြိုလှူ ထားချင်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ကြိုလှူထားလို့ မရပါဘူး။
သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းတိုက် သံဃာကလည်း ကြို အလှူခံထားလို့ လုံးဝမရပါဘူး ကြိုလှူထားတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့ကထိန်ခင်းရင် အဲဒီကထိန်ဟာ.. "ကထိန်အတု၊ ကထိန်အင်" ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့က အရုဏ် မတက်ခင် ( ကျီးမနိုးခင် ) ကထိန်သင်္ကန်း လှူတဲ့ " ကျီးမနိုး ကထိန်" က ပိုမြတ်တယ်လို့ ယူဆပြီး ၊အရုဏ် မတက်ခင် ( ကျီးမနိုးခင် ) ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းတတ်ကြပါသေးတယ်။
အရုဏ် မတက်ခင် ကထိန် သင်္ကန်းလှူလိုက်ရင် အရုဏ်မတက်ခင်ဘဲ ကထိန်ခင်းရပါတယ်။ အရုဏ်တက်ပြီးသွားမှ ကထိန်ခင်းရင် သင်္ကန်းသိုးသွားလို့ ကထိန် အထမမြောက်ပြန်ပါဘူး။ အရုဏ် တက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် နောက်တစ်ရက် ကူးသွားပါပြီ။
အရုဏ်အမီ ကထိန်ခင်းဖို့ အချိန် မလုံလောက်တဲ့အတွက် အဲဒီလို လှူတာမျိုး လုံးဝ ရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။
( ၃ ) "သံဃိက သင်္ကန်း"
ရဟန်းတစ်ပါးပါးကို လှူဒါန်းထားလို့ အဲဒီရဟန်းတစ်ပါးတည်းကပဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂလိက သင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်ခင်းလို့မရပါဘူး။
သံဃာအားလုံးကို လှူဒါန်းထားလို့ သံဃာ အားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ သံဃိက သင်္ကန်းနဲ့ပဲ ကထိန်ခင်းလို့ရပါတယ်။ သံဃာအများ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ "သံဃိက သင်္ကန်း” နဲ့ပဲ ကထိန်ခင်းခွင့် ရှိပါတယ်။
မိမိကြည်ညိုတဲ့ ဘုန်းကြီး တစ်ပါးပါး၊ ဆရာတော်တစ်ပါးပါးကို ဒီဆရာတော်ကြီး ငါကြည်ညိုလို့ ကထိန်သင်္ကန်း လှူလိုက်ဦးမယ် ဆိုပြီးတော့ ..
"ဆရာတော်ကို တပည့်တော် ကထိန် သင်္ကန်း လှူပါတယ်ဘုရား" ၊" ဘုန်းကြီးကို ကထိန် သင်္ကန်း လှူပါတယ် ဘုရား”လို့ မိမိ ကြည်ညိုတဲ့ ရဟန်းတော် တစ်ပါးပါးကို ပုဂ္ဂလိက အနေနဲ့ ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းခွင့် မရှိပါဘူး။
တချို့က ကထိန်ရာသီမှာ လှူတဲ့ သင်္ကန်းမှန်သမျှ ကထိန်သင်္ကန်းပဲ ထင်ပြီး ...
" အရှင် ဘုရားအတွက် ကထိန် သင်္ကန်းပါ ဘုရား" ဆိုပြီး ...လာလာ လှူလေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒီလို လှူလို့ လုံးဝ မရပါဘူး။ ရဟန်း တစ်ပါးချင်းကို “ကထိန် သင်္ကန်း”ဆိုပြီး လုံးဝလှူလို့မရပါဘူး။ အဲဒီလိုရဟန်းတစ်ပါးပါးကို လှူတဲ့ သင်္ကန်းကိုလည်း ကထိန်ရာသီမှာ လှူပေမယ့် “ကထိန်သင်္ကန်း” လို့ မခေါ်ပါဘူး။
ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ပါးပါးကို လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အဲဒီ သင်္ကန်းနဲ့လည်း ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။ ခင်းလည်းပဲ ကထိန်မအောင်မြင်ပါဘူး။သံဃာကို လှူဒါန်းတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့သာလျှင် ကထိန်ခင်းခွင့် ရှိပါတယ်။ ကထိန် အောင်မြင်ထမြောက် နိုင်ပါတယ်။
ကထိန်သင်္ကန်း "လှူဒါန်းနည်းက နှစ်မျိုး" ရှိပါတယ်။
( ၁ ) ကထိန်ခင်းမယ့် ကျောင်းမှာ သွားလှူတဲ့နည်း ၊
( ၂ ) ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ်ဋ္ဌာန၊ တစ်နေရာရာမှာ ပင့်လှူတဲ့နည်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကထိန်ခင်းမဲ့ ကျောင်းမှာ သွားလှူရင်တော့ ... " ဤကထိန် သင်္ကန်းကို သံဃာအား လှူပါ၏ " လို့ဆိုပြီး ...လှူလိုက်ရုံနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။
သံဃာအား လှူတယ်ဆိုပေမဲ့ ကထိန်ခင်းမဲ့ ကျောင်းမှာရှိတဲ့ သံဃာနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့် နေရာ၊ ကိုယ့်ဋ္ဌာနကို ပင့်ပြီး လှူမယ်ဆိုရင်တော့.... "ဘယ်ကျောင်းတိုက်မှာ ကထိန်ခင်းဖို့ အတွက် သံဃာအားလှူပါ၏" လို့ ...ကထိန်ခင်းမဲ့ " ကျောင်းတိုက် နာမည်" ကို တရားဝင်ထည့်ဆိုပြီး လှူဒါန်းရပါတယ်။ ဒါမှသာကိုယ်ရည်စူးတဲ့ ကျောင်းတိုက် သံဃာက ကထိန်ခင်းခွင့် ရမှာပါ။
ကျောင်းတိုက် နာမည် ထည့်မဆိုဘဲ နဲ့ "သံဃာအားလှူပါ၏" လို့ ရိုးရိုးလေး ဆိုပြီး လှူလိုက်ရင် အခမ်းအနားကို ကြွလာတဲ့ " ဆယ့်နှစ်တောင် ပတ်လည်အတွင်း" က ..တခြား ပင့်သံဃာ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက် ရည်စူးရာ ကျောင်းတိုက်မှာ ကထိန်ခင်းခွင့် မရှိတော့ပါဘူး။
ရဟန်းတစ်ပါးတည်းကို ပင့်ပြီး “သံဃာအား လှူပါ၏” လို့ ဆိုလှူလိုက်ရင်လည်း အဲဒီရဟန်းက အဲဒီသင်္ကန်းကိုယူပြီး တခြား ကျောင်းတိုက် တစ်ခုကို ဝင်လိုက်မိတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝင်မိတဲ့ ကျောင်းတိုက် သံဃာက အဲဒီသင်္ကန်းကို ပိုင်ဆိုင်သွားပြန်လို့ ရည်စူးရာကျောင်းတိုက်မှာ ကထိန်ခင်း မရတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်နေရာ၊ ကိုယ်ဠာန ပင့်လှူသူတိုင်း ကထိန်ခင်းလိုတဲ့ “ကျောင်းတိုက် နာမည်”ကို တရားဝင်ထည့်ဆိုပြီးမှ လှူသင့်ပါတယ်။
ကထိန်ခင်းမဲ့ ကျောင်းတိုက်မှာ သွားလှူတဲ့ အခါ.. " သံဃာအား”လို့ ထည့်မဆိုပဲ .. " ဤကထိန် သင်္ကန်းကို လှူပါ၏" လို့ ရိုးရိုးပဲ ဆိုလိုက်ရင်လည်း အဲဒီ ကထိန် သင်္ကန်းဟာ ကျောင်းတိုက်မှာ ရှိတဲ့ သံဃာ အားလုံး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သင်္ကန်း (သံဃိက သင်္ကန်း)ဖြစ်သွားပါတယ်။ “သံဃာအား”လို့ ထည့်ဆိုလိုက်တော့လည်း ပိုပြည့်စုံ သွားတာပေါ့။
ရဟန်း တစ်ပါးတည်း ဝါဆိုတဲ့ ကျောင်းတိုက်မှာ" သံဃာအား လှူပါ၏" လို့ ရွတ်ဆိုလျှောက်ထားပြီးလှူတဲ့ ကထိန်သင်္ကန်းဟာ.." သံဃာအား”လို့ ပါတဲ့အတွက် အရပ် လေးမျက်နှာမှာ ရှိရှိသမျှ သံဃာအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပေမဲ့ ကျောင်းတိုက်မှာ ဝါဆိုတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးကပဲ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
တစ်ပါးထက် ပိုများတဲ့ ရဟန်းတော်တွေ ဝါဆိုတဲ့ကျောင်းတိုက် တွေမှာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ "သံဃာအား လှူပါ၏" ဆိုတဲ့ သင်္ကန်းမှန်သမျှ အရပ်လေးမျက်နှာ သံဃာ(စာတုဒ္ဒိ သံဃာ)နဲ့ သက်ဆိုင်ရုံပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ပိုင်တဲ့ အခါမှာတော့ ကျောင်းတိုက် သံဃာ(အာရာမ သံဃာ) ကပဲ ပိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းတိုက် ပြင်ပက သံဃာဟာ ဆိုင်သာဆိုင် ၊ မပိုင်တဲ့သံဃာပါ။
ကိုယ်လှူတဲ့ သင်္ကန်းကို သံဃာတော်တွေ ဘယ်လိုပဲဆိုင်ဆိုင်၊ဘယ်လိုပဲ ပိုင်ပိုင် ကိုယ်ကတော့ သံဃာအားလုံးကို ရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းရမှာ ပါပဲ။ "အရပ်လေး မျက်နှာမှာ ရှိရှိသမျှ သံဃာအားလုံး ၊ သာသနာတော်မှာ ရှိခဲ့ပြီး၊ ရှိနေဆဲ၊ ရှိလတ္တံ့ သံဃာအားလုံးကို လှူဒါန်းပါတယ်" လို့
အာရုံပြုပြီး... "သံဃဿ ဒေမ = သံဃာအား လှူပါ၏"လို့ ရွတ်ဆို လှူဒါန်းလိုက်ရင် ကိုယ်လှူလိုက်တဲ့ သင်္ကန်းဟာ " တစ်သာသနာလုံး၊ တစ်လောကလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပုထုဇဉ်သံဃာ၊ အရိယာ သံဃာ သံဃာအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သံဃိက သင်္ကန်း" ဖြစ်သွားပါတယ်။ အများပိုင် သံဃိက သင်္ကန်းနဲ့ပဲ ကထိန်ခင်းလို့ ရပါတယ်။ တစ်ပါးပိုင် ပုဂ္ဂလိက သင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တကယ် ကထိန်ခင်းတဲ့ အချိန်မှာတော့ “အများပိုင် သံဃိက သင်္ကန်း”ကို “တစ်ပါးပိုင် ပုဂ္ဂလိကသင်္ကန်း” ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်လိုက် ရပါတယ်။
သံဃာက ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲ ကထိန်ခင်းလို့ ရပါတယ်။ သံဃာက ကထိန် သင်္ကန်းပေးရုံပဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။ သိမ်ထဲမှာ သံဃာတော်တွေ စုဝေးပြီး ကထိန်ခင်း ထိုက်တဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးကို ဉတ်ကမ္မဝါ နဲ့ ကထိန်သင်္ကန်း ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ကထိန် သင်္ကန်းကို ပုဂ္ဂလိကအဖြစ် ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ အဲဒီ ရဟန်းကမှ ကထိန်ခင်းရတာပါ။
ကထိန် သင်္ကန်းကို သိမ်ထဲမှာပဲ ပေးရပေမဲ့ ကထိန်ကိုတော့ သိမ်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သိမ်အပြင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခင်းလို့ရပါတယ်။
ရဟန်းတစ်ပါး ခင်းတဲ့ ကထိန်ကို သံဃာက ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ အနုမောဒနာ ပြုလိုက်ရင် သံဃာကလည်း ကထိန် ခင်းပြီးသား ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
ကထိန်ခင်းခြင်း ဆိုတဲ့ ဝိနည်းကံဟာ သံဃာ့ကံ မဟုတ်၊ ပုဂ္ဂလကံ ဆိုပေမဲ့ သံဃာကပဲ ကထိန် သင်္ကန်းပေးရ၊ ကထိန်ခင်းပြီးရင်လည်း သံဃာအားလုံးက အနုမောဒနာပြုတဲ့ သံဃာမှာလည်း ကထိန် အာနိသင်ရတဲ့ အတွက် သံဃာ့ကိစ္စ၊ သံဃာ့အလုပ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
“သံဃိက သင်္ကန်း”ကို “ပုဂ္ဂလိက သင်္ကန်း”အဖြစ် ကထိန်ခင်းမဲ့ ရဟန်းကိုပေးတာက သံဃာတော်တွေရဲ့ အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကထိန် အလှူရှင်တွေရဲ့ အပိုင်းကတော့ “သံဃိက သင်္ကန်း”အဖြစ်ပဲ လှူဒါန်းရမှာပါ။ ကထိန်ခင်းတဲ့ အချိန် ပုဂ္ဂလိက သင်္ကန်း လုပ်မဲ့ အတူတူပဲဆိုပြီး ... နဂိုကတည်းက ပုဂ္ဂလိက သင်္ကန်းအဖြစ် မလှူဒါန်းရပါဘူး။ လှူဒါန်းခဲ့ရင် ပုဂ္ဂလိက သင်္ကန်းကို သံဃာက ကထိန်ခင်းမဲ့ ရဟန်းကို ပေးလို့ မရတော့တဲ့ အတွက် ကထိန်ခင်းလို့ မရတော့ပါဘူး။
သံဃိက သင်္ကန်းကိုပဲ သံဃာက ကထိန်ခင်းမယ့် ရဟန်းကို ပေးလို့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကထိန် အလှူရှင်တွေ အနေနဲ့ မိမိတို့ ကြည်ညိုတဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါးပါး၊ ရဟန်း တစ်ပါးပါးကို ကထိန်သင်္ကန်း ရစေချင်တဲ့စိတ် လုံးဝမထားဘဲ ၊ " ဒီကထိန် သင်္ကန်းဟာ သံဃာ အားလုံးအတွက်”လို့ပဲ ရည်မှန်းပြီး ... သံဃာပိုင် သံဃိက စစ်စစ်ဖြစ်အောင် လှူဒါန်းကြရပါ
နောက်တစ်ချက် ဖြည့်စွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကထိန်သင်္ကန်းဟာ “ကိုယ်ပိုင် သင်္ကန်း” ဖြစ်ရပါမယ်။ ခေတ္တခဏ ငှားယူလာတဲ့ သင်္ကန်း (“အငှား”သင်္ကန်း)နဲ့ ကထိန်ခင်းရင် ကထိန်စစ်စစ် မဖြစ်ပါဘူး။
အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သင်္ကန်း ( ကိုယ်ပိုင် သင်္ကန်း)နဲ့ ကထိန် သင်္ကန်း လှူတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကထိန်ခင်းတဲ့ အခိုက်ကလေး ခေတ္တခဏ ငှားတဲ့ သဘောမျိုး မဖြစ်အောင် အထူး သတိပြု ရပါမယ်။
ကထိန်ခင်းခွင့် ရှိတဲ့ ကာလကတော့ ... " သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော်( ၁ )ရက်ကနေ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ အထိ တစ်လ( ၂၉-ရက် )” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်လ အတွင်းမှာပဲ ကထိန် သင်္ကန်းလှူခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒီတစ်လ အတွင်းမှာ ခင်းမှလည်း “ကထိန်စစ်စစ်”ြ ဖစ်ပါတယ်။
ကထိန်ခင်းဖို့အတွက် သံဃာက သိမ်ထဲမှာ သင်္ကန်းပေး တဲ့ ကံ ပြုရတဲ့အတွက် ကထိန်ကံ အောင်မြင်ဖို့ အနည်းဆုံး သံဃာ( ၅ )ပါး ရှိရပါတယ်။
ကထိန် သင်္ကန်းပေးတဲ့ ကံပြုတဲ့ သံဃာက ( ၄ )ပါး၊ ကထိန် သင်္ကန်းခံယူသူက ( ၁ )ပါး၊ စုစုပေါင်း ( ၅ )ပါး အနည်းဆုံး ရှိမှ ကထိန်ကံ အောင်မြင်ပါတယ်။ သင်္ကန်း ပေးဖို့ အတွက်သာ သံဃာ လိုတာပါ။ သင်္ကန်းပေးပြီးလို့ ကထိန်ခင်းတဲ့ အခါမှာတော့ သံဃာ မလိုပါဘူး။
တစ်ပါးတည်း ဝါဆိုတဲ့ ကျောင်းမှာ တစ်ပါးတည်း ကထိန်ခင်းလည်း ရပါတယ်။ အနုမောဒနာ ပြုရမဲ့ ရဟန်းတစ်ပါး ခေါ်ထားပြီး၊ နှစ်ပါးကထိန်ခင်းလည်း ရပါတယ်။ သင်္ကန်းပေးတဲ့ သံဃာတွေ စုံနေတုန်းမို့ သံဃာနဲ့ ကထိန်ခင်းလိုက်လည်း ရတာပါပဲ။ ရဟန်း တစ်ပါး ခင်းတဲ့ ကထိန်ကို ဝါဆိုတူ ကျောင်းတိုက်အတွင်းက ရဟန်းတော်တွေပဲ အနုမောဒနာ ပြုစရာ လိုပါတယ်။ ကိုရင် သာမဏေတွေ ကတော့ အနုမောဒနာ ပြုစရာ မလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တစ်ကျောင်းတိုက်တည်း အတူ ဝါဆိုကြတဲ့ သီတင်းသုံးဖေါ် ဘဝတူအချင်းချင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ကထိန် အာနိသင် သင်္ကန်း (ကထိန်ရံ သင်္ကန်း)တွေကို ကိုရင်တွေကိုလည်း အညီအမျှ ခွဲဝေပေးရပါမယ်။ ကိုရင်တွေလည်း အာနိသင် သင်္ကန်း( ကထိန်ရံ သင်္ကန်း) ရပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
တချို့က ကျောင်းဥပစာ ပရိဝုဏ် အရံအတား တူတဲ့ ကျောင်းတိုက် တစ်တိုက်တည်းမှာ နှစ်ကျောင်း၊ သုံးကျောင်း စသည်ခွဲပြီး သီခြားစီ ဝါဆို တတ်ကြပါတယ်။ကျောင်းတိုက်ကြီး တစ်ခုတည်းမှာ ဘယ်နှစ်ကျောင်းပဲ ခွဲဝါဆိုဆို ကထိန်ခင်းရင်တော့ တစ်ကျောင်း တိုက်လုံးပေါင်းပြီး၊ ကထိန် တစ်ခုတည်းပဲ ခင်းရပါမယ်။ ဒါမှကထိန်စစ်စစ် ဖြစ်ပါမည်။
Credit : အရှင်ဥာဏာဝုဓ (ဥာဏ​ရောင်ခြည်ဆရာ​တော်) ဦးခိုက်ပါ၏အရှင်ဘုရား
ဝေမျှပေးတဲ့ ကိုသက်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု ။
Read times Last modified on Friday, 05 November 2021 09:17